रामनगर गोलीकाण्डका वास्तविक दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ – शिवपूजन यादव [अन्तर्वार्ता]
सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिकामा गोली लागेर गत मंगलबार कांग्रेस कार्यकर्ताको मृत्यु भयो । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष रामनरेश महतोमाथि सोमवार कुटपिट भएपछि भोलिपल्ट मंगलवार गोली प्रहारबाट उनका काका रामविलाश महतो मारिए ।
सोमवार र मंगलवार एकाएक कुनै विवाद बढेर गोलीकाण्ड भएको भने होइन । गाउँमा कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष महतो र स्थानीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का कार्यकर्ताबीच विगत १ महिनादेखि विवाद चलिरहेको थियो । विवाद ‘भुसको आगोझैं’ भित्रभित्रै सल्किएर गोलीकाण्डको अवस्थामा पुगेको छ ।
यो घटनाका विषयमा नेकपाका नेता तथा पूर्व सांसद शिवपूजन यादवसँग लोकान्तरकर्मी अजय अनुरागीले यादवको गाउँ रामनगर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित बिर्ताटोल पुगेर रामनगर गोलीकाण्ड बारे कुराकानी गरेका छन् । उनकै संरक्षणमा नेकपाका कार्यकर्ताहरूले गोली काण्ड गरेको नेपाली कांग्रेसले दाबी गरिरहेको बेला यादवसँग कुराकानी गरिएको छ –
रामनगर गोलीकाण्डमा नेकपाका कार्यकर्ताको संलग्नता भएको आरोप नेपाली कांग्रेसले लगाइरहेको छ, के हो विवाद ?
यो घटना धेरै पहिलेदेखि आपसी विवाद र झैझगडाका कारण भएको हो । खास गरेर रामनगर गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा पहिला देखिनै विवाद छ । कांग्रेसले वडाध्यक्ष जितेपछि नेकपाका कार्यकर्ताहरू कुनै पनि काम गराउन जाँदा वडाध्यक्षले नगरिदिने समस्या थियो । विबाह दर्ता, जन्म दर्ता, नागरिकता, मृत्यु दर्ता लगायतका जुन सुकै सिफारिस गराउन जाँदापनि वडाध्यक्ष नेकपाको कार्यकर्ता भने पनि नगरिदिने ।
जसलाई तिमीहरूले भोट दियौ त्यस बाट गराउ भनेर वडाध्यक्षले भन्ने, सिफारिस नगरिदिने प्रवृति छ । त्यसैले आक्रोशमा आएर त्यहाँका केही युवा विद्यार्थीले वडाध्यक्षलाई गाली बेइज्जति गरेका थिए ।
त्यो १२ गतेको घटना हो । त्यस पछि १३ गते बिहान ६ बजे नै वडाध्यक्षका मानिसदेखि कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू नेकपाका कार्यकर्ताको घर घरमा गएर आतंक सिर्जना गर्न थाले । घर तोडफोड गर्नुका साथै नेकपा कार्यकर्तामाथि सांघातिक हमला गर्न थाले ।
वडाध्यक्षको टोलमा नेकपाका कार्यकर्ताको संख्या न्यून छ् । त्यस कारण विवाद चर्कियो । दुबै तर्फबाट ढुङ्गा मुढा हुन थाल्यो । विवाद बढ्दै गए पछि गोली चल्यो । नेकपाका कार्यकर्तालाई फसाउनका लागि कांग्रेसका कार्यकर्ताले आफैं गोली चलाएको कुरा मैले सुनेको छु ।
गोलीकाण्ड पछि त झन् कांग्रेसका कार्यकर्ताले नेकपाका मान्छेको उखु खेत जलाउने, धान खेत जलाउने, ट्रयाक्टर जलाउने, कुखुरा फारम जलाउने लगायतका काम गरेका छन् ।
शान्ति सुरक्षाको अनुभूति हुन नसकेपछि सबै पुरुष, युवामा भागाभाग भएको छ । गाउँमा मात्र महिला छन् । जुन घटनामा मेरो संलग्नता बताइएको छ त्यो गाउँमा म अहिलेसम्म पुग्न पनि सकेको छैन ।
वडाअध्यक्षलाई कुटपिट गरेको र घरमा लुटपाट गरेको उजुरी दिँदा आक्रोशित भएपछि नेकपाले आक्रमण र गोली चलाएको कुरा आइरहेको छ...
त्यहाँ जे घटना भएको छ त्यो वडाध्यक्षकै कारण मात्र भएको हो । साधारण सिफारिस समेत नगरिदिने भए पछि केही युवा र बिद्यार्थी आक्रोशित भएर वडाध्यक्षलाई सामान्य गाली बेइज्जति गरेको हो । त्यसमा फेरि नेकपाका कुनै नेता पनि थिएनन् । १३ गते नेकपाका ५ जना कार्यकर्ताको घरमा लुटपाट गरियो । । हाम्रो कार्यकर्ता श्रीनारायण रायको घरको धन खेती, कुखुरा फारम जलाइयो । रामबहादुर रायको ५ बिघामा गरिएको उखु खेती जलाइयो । जगत रायको घरमा लुटपाट गर्नुका साथै ठाकुर रायको ट्याक्टर जलाईयो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधसभा सदस्य अमरेश कुमार सिंहले त तपाईंको संरक्षणमा नेकपाका कार्यकताले घटना घटाए भन्नु भयो नि !
त्यो घटनाबारे मलाई खासै जानकारी छैन । तर, जब अमरेश कुमार सिंह क्षेत्रमा आउँछन्, तब तब बिबाद र झैँ झगडा हुने गरेको छ । त्यो घटना हुनु भन्दा एक दिन पहिले अमरेश सिंह त्यहाँ गाउँमा गएका थिए । उनले आफ्नो कार्यकर्तालाई के निर्देशन गरे र घटना भयो । उनले त्यहाँ निर्देशन दिए पछि मात्र घटना भएको हो ।
यसको अर्थ नेकपा र कांग्रेसको विवाद भन्दा पनि तपाईं र अम्रेशबीचको टलस हो ?
म टसल गर्न चाहन्न । तर, सर्लाहीको ४ नम्बर क्षेत्रमा उनी जतिबेला पनि टसल गर्न चाहन्छन् । उनको जातिको यो क्षेत्रमै जम्मा १३ सय भोट छ । त्यसैले जाती जातीबीच लडाउने, हिँसा गराउने, भोटको लागि जातीजातीमा लडाउने उनको योजना अनुसार नै यो क्षेत्र अशान्त छ ।
तपाईंले कुटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको अभियोग लागे पछि पछिल्लो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा तपाईंको उम्मेदवारी सिंहले नै रद्द गराएका कारण तपाईं अमरेश प्रति आक्रामक भएको भनेर पनि भनिन्छ नि ?
होइन, मेरो उम्मेदवारी रद्द भएपछि जनता सँग मेरो कुनै गुनासो छैन । जनतालाई मैले सधैं सहयोग गरेको छु । तपाईं सोध्नुस् क्षेत्रका जनतालाई मैले आफ्नो यो घरबाट सधै उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेको छु । त्यो घटना बारे मलाई त थाहा पनि छैन । मैले एसपी साहेब मार्फत मात्र थाहा पाएको हुँ ।
तपाईंको उम्मेद्वारी रद्द भए पछि अब तपाइंको राजनीति करियर नै समाप्त भएकाले अमरेश सिंह संग दुश्मनी गर्नु भएको हो ?
मेरो उम्मेद्वारी रद्द भयो । मैले आफ्नो मत राजपालाई दिन भनेको थिएँ । तर पनि हंसुवा हथौडामा ६५ सय मत खस्यो र बदर भयो । त्यो मत मात्रै राजपामा गएको भए अमरेश सिंह हारिसकेका हुन्थे । सामान्य मतान्तरले उनी जितेका हुन् । अझै पनि मेरो जनता मेरो साथमा छ ।
बम बारुदको राजनीति हामी गर्दैनौं । त्यसको राजनीति कांग्रेसले गरिरहेको छ, मेरो क्षेत्रमा । जनतालाई आतंकित गरिरहेका छन् ।
अमरेश र शिव पूजन राय यादवको विवादका कारण पूरै क्षेत्र आतंकित रहेको क्षेत्रका मानिसहरूले भनिरहेका छन् । तपाईं दुई जनाको राजनीतिक टकरावका कारण जनतालाई त आतंकित पार्नु भएन नि !
अमरेश सिंहसँग मेरो पनि कहिले काँही भेटघाट हुन्छ । अब हामी जनतालाई भीडाउन चाहँदैनौं । तर समस्या केहो भने गाउँ घरमा सामान्य झैँ झगडा र आपसी विवादमा पनि पार्टीकरण गरिन्छ । राजनीति गरिन्छ । त्यसकारण विवाद झन् बढ्छ । त्यस पछि आआफ्नो कार्यकर्ताको संरक्षण त गर्नै पर्छ ।
त्यही भएर गोली चलाउने कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्नु भएको हो ?
मैले पहिले पनि भने त्यसमा हाम्रो कार्यकर्ताको कुनै पनि संलग्नता नै छैन । मलाई कार्यकर्ताले दिएको जानकारी अनुसार हामीलाई फसाउनका लागि उनीहरूले आफैंले गोली चलाएर हत्या गरेका छन् । घटनास्थल मेरो गाउँबाट ३ किलोमिटर खोलापारी हो । सबै कार्यकर्ताको भागाभाग छ । म आफैं पनि त्यहाँ पुग्न सकेको छैन ।
तपाईंको परिवारका सदस्यको पनि संलग्नताको आरोप छ नि ?
मेरो वा मेरो कुनै भाइ त्यहाँ गएकै छैन ।
वडा अध्यक्षले सिफारिस नै नगरेका कारण हत्या नै गर्ने गरी गोली काण्ड भएको हो त ?
दुवै तर्फबाट झडप भए पछि त्यस्तो घटना भएको हो । त्यहाँ त खैर्बा बौहर्बा चौकीका प्रहरी पनि खटिएकै थिए । प्रहरीलाई पनि सबै कुराको जानकारी छ ।
घटनामा संलग्नलाई पार्टीको आडमा संरक्षण गर्न मिल्छ ?
घटनाका जो बास्तविक दोषी हो, छानबिन गरेर कारबाही गरिनुपर्छ । तर, निर्दोष मान्छेलाई फसाउने काम गर्नु हुँदैन । त्यसो भयो भने बिबाद झन् बढ्न सक्छ । घटनामा नभएका मानिसलाई पनि फसाउन खोजिएको छ । जस्तै शुभनारायण यादब गोडैता नगरपालिकाका सुब्बा पदमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । उनी घटना भएको दिन नगरपालिकामा थिए । त्यसको हाजिरी पनि छ । तर, उनलाई फसाउने काम भइरहेको छ । घटनाका वास्तविक दोषीलाई कारबाही हुनु पर्छ भनेर त मैले भनिरहेकै छु ।
यो क्षेत्र अब कसरी शान्त हुन सक्छ ?
यो क्षेत्र शान्त हुनका लागि सबै भन्दा पहिले अमरेश सिंह शान्त हुनु पर्छ । सांसद अमरेश सिंह, विधायक वीरेन्द्र सिंह लगायतले जनतालाई गएर उचाल्ने काम बन्द गर्नु पर्छ । जबर्जस्ती घटनामा हाम्रा निर्दोष कार्यकर्तालाई फसाउने काम तत्कालै बन्द गर्नु पर्छ । निर्दोष कार्यकर्तालाई फसाउने काम गर्यो भने द्वन्द्व रही रहन्छ । कहिल्यै पनि यो क्षेत्र शान्त रहन सक्दैन ।
गोली प्रहार गर्ने व्यक्तिहरूको नामै घाइतेद्वारा किटान गरिएको छ, पहिचान गरिएको छ । तर,सत्ताको प्रयोग गरेर स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई दवाव दिएर अपराधी पक्राउ नगराएको कांग्रेसको आरोप छ नि ?
मैले एसपी, सिडिओ कसैलाई पनि केही भनेको छैन । केन्द्रिय सरकारले पनि केही भनेको छैन । हो, निर्दोष कुनै हालतमा फस्नु भएन र दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुस भनेर भनेको छु ।
समग्रमा भन्ने हो भने तपाईं र अमरेश सिंहबीच कुरा नमिलुन्जेल यो क्षेत्र अशान्त नै रहन्छ, होइन ?
मैले टसल लिएको होइन । त्यसको सुरुवात अमरेश सिंहले नै गरेका हुन् । २०६४ सालको चुनावदेखि नै टसल सुरु भएको हो । उहाँले नै गोली, बम बारुदको राजनीति सुरुवात गरेको हो । मेरो गाविस गरहियामा चुनावका दिन बुथ कव्जा गर्न उनले आफ्ना भाइ शम्भु सिंहलाई वम बारुद, बन्दुकसहित पठाएका थिए ।
बुथ कव्जा गर्ने बेलामा बम बिष्फोटन भएर उनका भाइ शम्भु सिंह मारिएका थिए । तर, अमरेश सिंहले त्यो मुद्दामा म लगायत मेरो पाँच जना दाजुभाई, मेरो बुवा बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गराए । पछि हामी अदालतमा हाजिर भयौं । र त्यस मुद्दामा हामी सबै जनाले सफाई पाईसकेका छौं । त्यही बेलादेखि हामी बीच द्वन्द्व बढेको हो ।
त्यसैको तुषको परिणामको घटना हो यो ?
बिल्कुलै होइन । द्वन्द्व त अमरेश सिंहले जबर्जस्ति गरिरहेका छन् । उनले जातीयताका आधारमा जनतालाई भीडाउने काम गरिरहेका छन् । जहाँसम्म मेरो कुरा हो, चुनाव सकिएपछि मैले कुनै पनि गाउँमा आफ्नो कार्यकर्तासंग कुनै बैठक वा भेला सम्म गर्न सकेको छैन । काठमाडौंदेखि घर र घर देखि काठमाडौं मात्र गरिरहेको छु । जनतालाई उचाल्ने काम त अमरेशले गरिरहेका छन् ।
पहिरोले घर पुर्दा २ जनाको मृत्यु, १ घाइते
यसकारण गरियो भारतमा विकास दुबेको इन्काउन्टर ?